Abuhlungu Soda, abuhlungu Soda Imihlubulo, Soda Ash, Sodium emanzini, PVC nentlaka - Jiahengyuan
Calcium khabhayithi 295L / kg
Umgangatho wethu batshatileyo Nge Price yethu
imali Mondy Ukuba Quality Bad
Inkonzo ngu Team zobungcali
nkonzo By Team Professional
Kweminyaka 21 amava yemveliso
10 Unyaka Experience Exporting
Le nkampani lokubanjwa JiaHengYuan yi NaMei Chemicals Co., Ltd. NaMei Chemicals Co., Ltd ekuqaleni yasekwa ngo-1998 Thina ligxininisa kwimveliso ukunika icaustic kwaye ngoku ziye zaba enye zabathengisi ibalulekileyo icaustic xa kumntla China thina.
neeperile soda abuhlungu
Umgca weAlkyl Benzene Sulfonic Acid 96% LABSA
I-SLS 92% 94% ye-sodium lauryl sulphate K12 powder i ...
I-Ethyl alcohol 96% 99% kunye ne-IPA 99%
Unyango lwaManzi kwiAlunimium Sulphate
I-PVC YENTLOKO KWI-MARKET
Ixesha elizayo le-PVC liyaqhubeka nokuwa, ukuqhuba indawo ukuba iwe. Kwicala langaphandle, ngenxa yokwehla kutsha nje kwimakethi yeoyile ekrwada kunye nefuthe leziganeko zempilo yoluntu lwangaphandle, imfuno ye-PVC yehle kakhulu, ...
Isodium cyanide sisixhobo esingaphiliyo, sisiqina esimhlophe esinyibilikayo emanzini. I-Cyanide inobuhlobo obuphezulu besinyithi, ke le tyuwa inetyhefu enkulu. Kulula ukuhambisa ukutya, kunye nevumba elibi elikrakra leamangile. I-Soluble kwi-wate ...
Kuchatshazelwe ulondolozo lwendawo enye lwamashishini, ixabiso leasithiki yasekhaya lenyuke ngokufutshane kwinqanaba lokuqala, ukwanda malunga ne-50 / itoni, kodwa imarike yangoku iyonke isabonisa imeko ye-overs ...
KWI-MARKET YE-HYDROGEN PEROXIDE
Ekuqaleni kwale veki, ukusebenza kweemarike ze-hydrogen peroxide kwaxutywa. Umntla wawungena manqaphanqapha, kwaye emazantsi alinde ukubona ukugqitywa. Ukuhanjiswa kunye neendaba zeendaba kugxilwe ngakumbi. ICaprolacta ...
SODA UTHOTHO UKUKHANYA SODA Uthuthu INKINGA
Ixabiso lothuthu lwashukela lwasekhaya luzinzile kule veki. Amanzi asezantsi ikakhulu asekwe ekuthengeni, kwaye eyona ntengiselwano iyaguquguquka. Kulindelwe ukuba ixabiso lesoda ash liza kuhlengahlengiswa ngaphakathi ...